Halyeey kooxda Man United ah oo sharaxay tayada gaarka ah ee Van de Beek – Gool FM
(Manchester) 03 Seb 2020. Manchester United ayaa si rasmi ah u shaacisay inay dhameystirtay heshiiska xiddiga reer Holland ee Donny van de Beek, kaasoo kaga soo biiray naadiga dalka Holland ee Ajax Amsterdam.
Halyeeyga kooxda kubadda cagta Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa ammaanay xiddiga dhawaangalka ah Red Devils ee Donny van de Beek.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay halyeeyga kooxda Manchester United ee Rio Ferdinand, wuxuuna yiri:
“Van de Beek! Manchester United iyo funaanada casaanka ah, muxuu ku soo kordhin doonaa kooxda? Wuxuu ku soo kodhin doonaa goolal, caawin, iyo maskax weyn, waa ciyaaryahan da’ayar ah oo yaqaana sida loo ciyaaro kubadda cagta ee aad u wanaagsan”.
Sidoo kale Rio Ferdinand ayaa sheegay in Donny van de Beek loo arko mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican adduunka:
“Qiyaas Donny oo ka garab ciyaaraya ciyaartoy sida Bruno Fernandes”.
Ferdinand ayaa xusay tirakoobyada xaqiijinaya qiimaha Van de Beek, isaga oo tilmaamay in xiddiga reer Holland saddex xilli ciyaareed ee ugu dambeysay uu dhaliyay goolal ka badan ciyaaryahan kasta oo qadka dhexe ka ciyaara horyaalka Premier League, kaddib Kevin De Bruyne, isagoo dhaliyay 40 gool, isla markaana caawiyay 29 gool kale.
Yeelkeede, Van de Beek ayaa maray baaritaano caafimaad wuxuuna saxiixay qandaraas shan sano ah, oo uu dooq u heysto inuu ku darsan karo hal sano oo dheeri ah, sida ay ku shaacisay Red Devils bayaan ay ku soo qortay website-keeda rasmiga ah.